Persily | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Moa ve parsley ny legioma sa tsia?
Sarotra ny mahita olona tsy tia parsley. Amin'ny ankapobeny, ny voam-bary dia mifandray amin'io teny io ao anatin'ny fahatsiarovan-tena, saingy misy vehivavy tokana mahafantatra fa ny fototry an'io zavamaniry io dia tsy dia mamo sy sarobidy loatra noho ilay ampahany ety ambony, noho izany, ny parsley dia indraindray antsoina hoe legioma, ary indrindra ny fototarazo. Inona io kolontsaina io, inona avy ireo endriky ny rafitra, ny tsy fitoviana amin'ny karazan-java-maniry hafa - horesahina ato amin'ity famerenana ity avokoa izany rehetra izany sy ireo zavatra maro hafa.
Karazam-panafody amin'ny karazana parsley sy ny fampiasany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Parsley dia iray amin'ireo zavamaniry tena tian'ny ankamaroan'ny mpivaro-tena. Ny taom-pamokarana dia afaka manaparitaka tanteraka ny sakafon'ny hena sy ny legioma, ary ny trondro. Na izany aza, vitsy ny olona mahafantatra ny toetra mahasoa ny fototry ny ahi-maitso, ary koa ny fanasitranana amin'ny fomba maro samihafa mifototra amin'izany. Ity lahatsoratra ity dia hijery akaiky ny fomba fijerin'ny parsley, ny fomba tsara ho an'ny fahasalamana, ary ny fomba hikarakarana azy tsara.
Aretina azo avy amin'ny fampidirana parsley
Ny Parsley dia ampiasaina betsaka ho toy ny fanatodizana sakafo isan-karazany. Ny fanafody sy ny teôs avy amin'izany dia afaka mitondra tombontsoa lehibe ho an'ny vatana. Raha mahay mamboly azy ao an-trano ianao, dia afaka mankafy zava-pisotro mamy ary mahazo vokatra manasitrana. Vakio ny momba ny fampidirana parsley sy ny fampiharana azy dia hiresaka ao amin'ilay lahatsoratra.
Ahoana no hambolena parsley ho an'ny fitomboana haingana?
Alaivo sary an-tsaina hoe zaridaina tsy misy parsley dia saika tsy azo tanterahina, mihalehibe izy io ho an'ny famokarana legioma sy voankazo mamelana, izay ampiasaina hanatsarana ny tsiron'ny sakafo isan-karazany. Ny fomba mahomby mitombo ny parsley eo amin'ny varavarankelin'ny varavarankely na ao amin'ny zaridaina, ny fomba hanomezana voa tsara sy haingana ny voa, afaka mamaky bebe kokoa amin'ny antsipiriany bebe kokoa ianao.
Fomba fampiasa amin'ny glas kosmetika kosmetika
Ny vehivavy tsirairay dia manonofy endrika tava sy malefaka. Na dia izany aza, te-handany fotoana fohy izy amin'ny fikarakarana azy, fa mba hahazoana vokatra faran'izay betsaka. Amin'ity tranga ity dia tena manampy tokoa ny menaka makiazy ho an'ny tarehy. Ny tena mahazatra dia kobam-bary vita amin'ny rano madio miaraka amin'ny herisetra sasany.
Fomba hiadiana amin'ny aretina sy ny bibikely
Ny mpamboly tsirairay dia maniry ny hahazo vokatra be dia be sy tsara, nefa tsy mipoitra foana. Matetika ny legioma no atahorana hiharan'ny bibikely na aretina. Ny vokatra dia mijaly noho ireo zava-doza ireo, noho izany dia mila mitari-dalana amin'ny antony mahatonga ny zaridaina ianao ary afaka mandray fepetra hamahana azy ireo.
Ahoana ny fampiasana persily ho an'ny fitsaboana
Ny parsley any an-tanimboly dia tsy vitan'ny fofona na mpamatsy vitaminina sy microelements. Afaka manampy amin'ny trangan-javatra mampidi-doza toy izany izy. Io trano io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Fantatray hoe inona no ilàna ny parsley rehefa mahatsiravina, inona no tsy mety amin'ny fampiasana azy, ahoana no fomba fitondran'ny fery amin'ny tongotra, fampiasana.
Ahoana ny famaranana ny vohoka amin'ny parsley eo am-piandohana
Ny tsimokaretina sasany dia mety hiteraka fihenitrin'ny taolam-paty sy ny fandavana ny foetus. Ny parsley dia heverina ho iray amin'ireo zavamaniry ireo. Ny fanontaniana hoe marina ve izany, ary raha azo atao ny manala zaza amin'ny fanampiany, dia hamaly ity lahatsoratra ity. Ahoana ny endriky ny parsley eo amin'ny vatan'ny vehivavy iray mandritra ny fitondrana vohoka Ny vehivavy, indrindra fa ny tanora, dia maniry ny fomba voajanahary amin'ny fanalan-jaza.
Ireo karazana ilaina sy fomba fampiasana voan-javamaniry
Na dia ireo Grika fahiny aza dia nahatsikaritra ireo toetra fanasitranana parsley, ary amin'izao fotoana izao io maitso io dia malaza amin'ny lafiny samihafa amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Saingy ny lazany dia tsy nahazo ny masombolon'io zavamaniry io, izay matetika nariana na nandeha namelona ny omby. Ary tsy misy ilana azy, satria amin'ny fampitahana dia mitovy amin'ny ravina malemy izy ireo.
Ny endriky ny parsley mba hampitombo ny isam-bolana
Ny vatana isam-batan'olona tsirairay, noho izany dia tsy dia mafy loatra ny fiovan'ny isam-bolana ho an'ny sasany. Amin'ny iray volana, dia mety hanomboka amin'ny 24 andro ny fandidiana, ary amin'ny iray hafa, aorian'ny 30 andro. Ny fahasamihafana eo amin'ny tsingerina ary, araka izany, ny fahataperan'ny vanim-potoana mandritra ny roapolo isaky ny 2-6 andro dia heverina ho ara-dalàna. Saingy misy ny toe-javatra iainan'ny vehivavy manandrana miantso isam-bolana amin'ny fomba rehetra ary manamaivana ny fahatongavany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Persily